Chelsea oo dalab rikoor ah u diyaarisay Borussia Dortmund kaasoo ku aaddan saxiixa Haaland…(& Fursad qaali ah oo ka hoos baxeysa Blues) – Gool FM
Chelsea oo dalab rikoor ah u diyaarisay Borussia Dortmund kaasoo ku aaddan saxiixa Haaland…(& Fursad qaali ah oo ka hoos baxeysa Blues)
(London) 08 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa haatan lagu soo warramayaa inay diyaarisay dalab qiimo ahaan rikoor u sameyn doona suuqa kala iibsiga ee kooxaha Premier League kaasoo ay naadiga Borussia Dortmund kaga soo qaadaneyso Erling Haaland.
Wargeyska 90min ayaa sheegay inay Blues diyaarisay dalab qiimo ahaan gaaraya 150 milyan oo gini kaasoo ay ku doonayaan inay Dortmund kaga soo qaataan weeraryahankeeda, waxaana intaas ay raacisay inay kooxda Bundlesiga ciyaarta ku adag tahay inay diiddo dalabkan oo kale.
Inkastoo ay Chelsea xagaagii hore 120 milyan oo gini ay ku qarash gareysay saxiixyada Kai Havertz iyo Timo Werner, haatanna waxay diyaar u tahay soo qaadashada weeraryahan sare sida Haaland, taas baddelkeedna waxay albaabada u furtay oo ay iib u raadineysaa Tammy Abraham iyo Olivier Giroud.
Dhinaca kale, kooxda Ingiriiska ka dhisan ayaa heli karta fursad ay laacibka reer Norway ku heli karto 64 milyan oo gini xagaaga dambe, maadaama lacagahaas ay yihiin kuwa lagu jebin karo qandaraaska 20-sano jirkan kula jiro Dortmund isagoo dhaqan galaya xagaaga dambe.
Sidaas darteed, haddii ay Blues go’aansato inay hal sano dib u dhigato qorshaheeda saxiixa Haaland, waxay ku heli doontaa wax ka yar kala bar qiimiha ay haatan ku dooneyso.
Xulka qaranka England oo balan kaga sameystay Italy kulanka finalka koobka EURO 2020 kaddib markii uu ka adkaaday Denmark… +SAWIRRO